Powder Tianeptine manta (66981-73-5) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Vovoka Tianeptine manta (66981-73-5)
Oktobra 30, 2018
Ny vovoka Tianeptine dia nootropic sy antidepressant mifantina serotonin re-uptake enhancer (SSRE). Amin'ny ankapobeny dia amin'ny …… ..
Vovoka Tianeptine manta (66981-73-5) horonantsary
Ny tsiranoka Tianeptine raindy dia mpitsabo mpanimba tsindrim-peo miaraka amin'ny tantaram-pirazanana momba ny neurochemical. Ny vovobony Tianeptine Raw dia tsy hita fa misy fiantraikany ratsy amin'ny saina, psychomotor, torimaso, fihenan-tsakafo sy ny fiakaran'ny vatana ary ny tsy fahampian-tsakafo. Ny tsiranoka vita amin'ny Tianptine dia manana profil amin'ny pharmacokinétique mahasoa. Tsy voan'ny metabolisma hepatika voalohany izy, manana ny fizaka-piainana avo dia avo ary ny fizarana voafetra, ary dia miala haingana. Raha toa ka manolotra tombontsoa ho an'ny vovobony Raw Tianeptine ny mpitsabo amin'ny tricyclic antidepressantants momba ny titration dose, ny fiovana amin'ny fitsaboana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny zava-mahadomelina, ny fanesorana haingana dia mahatonga ny fitsaboana maivana kokoa. Ny tsiranoka miendrika Tianeptine dia samy hafa amin'ny antidepressantsy indrindra satria tsy azo avy amin'ny metabolika ny cytotoxum P450, izay midika fa tsy dia misy loatra ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina sy ny zava-mahadomelina; Tena mahaliana manokana ireo marary zokiolona izany.
Vovoka Tianeptine manta (66981-73-5) Famaritana
Product Name Rano Tiptin
Anarana simika Rano Tiptin Rano; 66981-73-5; 72797-41-2; Tondraptine poids Acid; Rano Tiptin
Drug Class depression episodes
molekiolan'ny Formula C21H25ClN2O4S
molekiolan'ny Wvalo 436.951 g / mol
Monoisotopic Mass 436.122 g / mol
mitsonika Point 148
Boiling Point 609.2
Ny antsasaky ny biolojia Tsy misy daty misy
Color Vovoka fotsy hatramin'ny fotsy fotsy
Solubility Tsy misy daty misy
Storage Temperature vata fampangatsiahana
Application Fanafody ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo trangan-javatra goavambe lehibe (malefaka, marefo, na mavesatra).
Rano Tiptin Rano (66981-73-5) Description
Ny poety Tianeptine dia dingana voalohany ampiasaina hanatsarana ny soritr'aretin'ny aretina mafy (MDD). Nampiasaina koa izy mba hanampiana ny aretina tsiranoka sy ny asmaty. Raha ny endriky ny rafitra, izy dia sokajiana ho toy ny tricyclic antidepressant (TCA), na izany aza, izy dia manana toetra faran'ny toeram-panafody toy ny tricyclic antidepressants. Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tianeptine&oldid=695251" Sokajy: Ny anarana marika dia i Stablon, Coaxil. Tatinol, Tianeurax, ary Salymbra.
Ny poety Tianeptine dia tsy mifandray amin'ny tsiranoka mivaona, psychomotor, torimaso, fihenan-tsakafo na ny fiakaran'ny vatan'ny olona ary ny tsy fahampian-tsakafo. Ny tsiranoka vita amin'ny Tianptine dia manana profil amin'ny pharmacokinétique mahasoa. Tsy voan'ny metabolisma hepatika voalohany izy, manana ny fizaka-piainana avo dia avo ary ny fizarana voafetra, ary dia miala haingana. Raha toa ka manolotra tombontsoa ho an'ny vovobony Raw Tianeptine ny mpitsabo amin'ny tricyclic antidepressantants momba ny titration dose, ny fiovana amin'ny fitsaboana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny zava-mahadomelina, ny fanafoanana haingana dia mahatonga ny fitsaboana maivana kokoa. Ny tsiranoka miendrika Tianeptine dia samy hafa amin'ny antidepressantsy indrindra satria tsy azo avy amin'ny metabolika ny cytotoxum P450, izay midika fa tsy dia misy loatra ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina sy ny zava-mahadomelina; Tena mahaliana manokana ireo marary zokiolona izany.
Vao haingana, ny Tianeptine dia misy amin'ny firenena Eoropeana, Azia ary Amerika Atsimo. Voarara any Royaume-Uni izy ary tsy misy dokotera dokotera any Etazonia.
Tondraptine vovoka (66981-73-5) Mechanism of Action
Ny fanadihadiana vao haingana dia manambara fa ny tianeptine dia miasa amin'ny agonista feno ao amin'ny receptor opioid (MOR). Ny mpitaingina ny opioid dia heverina ho taratra mahomby ho an'ny fitsaboana antidepressant. Heverina fa ny vokatry ny kliika momba ny tianeptine dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny famolavolana azy ireny. Ankoatra ny hetsika nataony tao amin'ny receptor opioid, ny fianarana teo aloha dia nanefa ny asany amin'ny fiantraikany amin'ny receptor serotonine receptor dopamine (D2 / 3) sy ny receptors glutamate.
Ny vovoka Tianeptine dia fanafody antidepresy sy fihenan-tsofina tsy manam-paharoa izay mandrisika ny fandraisana serotonin (5-hydroxytr Egyptamine; 5-HT), ary ny asidra 5-hydroxyindoleacetic (5-HIAA) ao amin'ny vatan'ny ati-doha.
Na dia hita fa mifandraika amin'ny fisehoan'ny aretina mampihorohoro aza ny serotonine monoaminergic neurotransmitters serotonine (5-HT), noradrenaline (NA) sy dopamine (DA) dia fantatry izao fa ny tsy fahampian'ny monoamine dia tsy ampy hanazava ny fomba fiasan'ny antidepresse fanafody.
Fampiharana ny poety Tianeptine (66981-73-5)
▪ Ny Tianeptine dia manatsara ny soritr'aretin'ny aretina mikorontana (MDD)
▪ Ny Tianeptine dia manampy amin'ny soritr'aretin'ny tsinay sy ny sohika
▪ Manatsara ny toe-po ny Tianeptine ary mampitony ny fanahiana.
▪ Ny Tianeptine dia mampitombo ny serotonin-tsofin'ny ati-doha
▪ Ny Tianeptine dia manatsara ny antony manosika, mifantoka ary mifantoka amin'ny saina, manakana ny tebiteby, manome aina indray ary mampihena ny havizanana.
Ny poety Tianeptine Recommended (66981-73-5) Dosage
Ny vovoka Tianeptine dia matetika voatendry amin'ny fatra 12.5 mg ary alaina in-telo isan'andro. Tsy toy ny TCA hafa sy ny mpanakana ny serotonin reuptake (SSRIs), ny doka tianeptine dia tsy mila ampitomboina miadana ary tsy ilaina ny taper rehefa ajanona ny fanafody.
Ny voka-dratsin'ny poety Tianeptine (66981-73-5)
Ny voka-dratsin'ny vovoka tianeptine dia voafetra ihany. Raha ampitahaina amin'ny TCA hafa ary na dia ny kilasy antidepressants SSRI aza, ny vovoka tianeptine dia saika tsy misy vokany. Na eo aza ny piraofilin'ny vokany malefaka dia zava-dehibe ny tsy fampifangaroana ny tianeptine amin'ny monoamine oxidase inhibitors na antidepressants hafa satria mety hampidi-doza ny fiainana ny fifangaroana. Ny Tianeptine koa dia tsy tokony afangaro amin'ny fanafody fanatoranana ary ny fampiasana azy dia tokony hatsahatra 24-48 alohan'ny fidirana an-tsehatra fandidiana mitaky fanatoranana na hypnotika. Ireto misy vitsivitsy amin'ny voka-dratsin'ny aretina tianeptine.
▲ Dry vava
▲ mahita tory
▲ Fiovana amin'ny fiankinan-doha
▲ Fahitana mitranga
▲ Diso fanavakavahana
Rano Fasoracetam Rao (110958-19-5)